Warar - Alaabooyin dhaca, sicirka oo kordha, iyo amarro ayaa loo qorsheeyay nuska hore ee sanadka soo socda! 8-inji oo ah awoodda macdanta wafer ayaa buuxa
Alaabada la dhaco, qiimaha ayaa kordha, iyo amarada ayaa loo qorsheeyay nuska hore ee sanadka soo socda! 8-inji oo ah awoodda macdanta wafer ayaa buuxa
Sababtoo ah koritaanka degdegga ah ee dalabka dalabka sawirka dareeraha CIS, maaraynta maaraynta awoodda PMIC, qashinka aqoonsiga faraha, Chip Bluetooth, xusuusta khaaska ah, iwm., Amarrada 8-inji canjeero ayaa kulul.
Sida laga soo xigtay Securities Times, iyada oo si tartiib tartiib ah loo bilaabay 5G taleefannada gacanta, baahida loo qabo aasaaska qaybaha muhiimka ah ayaa sii socota. Shirkadaha macdanta sida TSMC, Samsung, GF, UMC, iyo SMIC waxay leeyihiin awood buuxda waxayna noqdeen suuq iibiyayaal.
Samsung waxay tixgelinaysaa maalgashi otomaatig ah oo loogu talagalay khadka wax soo saarka ee 8-inch ah, laga soo bilaabo gaadiidka gacanta ilaa gaadiidka mashiinka, waxaana la filayaa inay ku bixiso wax ka badan 100 bilyan oo doolarka Mareykanka.
Sida laga soo xigtay warbixinta Securities Times, sababtoo ah yaraanta awoodda wax soo saarka macdanta, qaar ka mid ah soo saarayaasha nashqadeynta IC-ga ayaa shaaca ka qaaday inay sare u qaadeen qiimaha filimada cusub mustaqbalka dhow waxayna ogeysiiyeen macaamiisha inay kordhiyaan qiimaha macdanta rubuca afaraad ee tan. sanadka iyo sanadka soo socda.
Marka loo eego xisaabinta Aasaasihii Amni, tan iyo Sebtember, awoodda 8-inji ee waferku way adag tahay, muddada gaarsiinta macdanta ayaa si isdaba joog ah loogu kordhiyay illaa 3 bilood ama xitaa in ka badan nus sano. Waxaa la filayaa in qiimaha macdanta ee amarrada cusub ee rubuca afaraad la kordhin doono. Wuxuu kici doonaa 10%.
Sida laga soo xigtay ilaha warshadaha, Shenzhen De Ruipu ayaa hogaamisay soo saarista ogeysiiska kororka qiimaha badeecada bishii Sebtember 18, iyadoo ku dhawaaqday in shirkaddu go'aansatay inay wax ka bedesho qiimaha badeecadeeda si waafaqsan Oktoobar 1, 2020. 8205-keeda wuxuu ku saleysnaan doonaa sicirka asalka ah . Kordhi 0.02 yuan.
Shirkad kale oo soo saarta tuubada MOS, Shenzhen Jinyu Semiconductor, ayaa iyaduna warqad xiriir ah u dirtay macaamiisha si kor loogu qaado qiimaha. Laga bilaabo Oktoobar 1, 2020, qiimaha MOS tuubada iyo alaabada taxanaha ah ee IC ayaa lagu hagaajin doonaa si waafaqsan 20% -30%.
Falanqeeyayaasha qaar ayaa sheegay in qodobka wadida baahida hadda jirta ee wax soo saarka 8-inch ee hadda jira ay tahay kororka joogtada ah ee baahida loo qabo jajabyada analogga ah iyo aaladaha korantada, halka heerka kobaca ee sahaydu uu ka dambeeyo heerka koritaanka baahida, taas oo ka dhigaysa soo saarayaasha waaweyn si firfircoon u hawlgal macdanta.
Warshadaha Amniga ayaa sheegay in jajab yaraanta hada jirta ay inta badan sababto khalkhalka alaabada. Qaar ka mid ah magacyada taleefannada gacanta ayaa kordhiyay iibsashada jabsiga seddexdii bilood ee la soo dhaafay si loo hubiyo amniga silsiladda. Natiija ahaan, tirakoobka warshadaha hadda jira ayaa ku jira heer aad u hooseeya.
Isla mar ahaantaana, Xiaomi, OPPO iyo noocyo kale ayaa rajeynaya isbeddellada waaweyn ee saamiga taleefanka gacanta sanadka soo socda. Waxay ku rajo weyn yihiin koritaanka saamiga sanadka soo socda. Waxay sidoo kale kordhiyaan hadafka ah keydinta. Looma diidin inay jirto xaalad siyaado ah. Sidaa darteed, damaanad qaadka warshadaha ayaa rajeynaya in yaraanta ay sii socon doonto illaa qeybta hore ee sanadka soo socda. .